Hubinta tayada - Dongguan Walley Makiinado Teknolojiyadeed Co., Ltd.
Waxaan si adag u aaminsanahay in dhamaadka hore ee badeecada ay tahay mudnaanta koowaad ee ilaalinta tayada. Iyadoo loo marayo nidaamka IPQC ee baaritaanka maqaalka koowaad, kormeerka nidaamka iyo kormeerka ugu dambeeya, tayada habka wax soo saarka waa la xakameyn karaa lana wanaajin karaa si loo hubiyo gudbinta heerka alaabada;
Si looga hortago qulqulka badeecadaha aan u qalmin, waxaan sameynay kormeer howleed (FQC) si aan ugu fulino kormeer dufcadeed badeecada ay soo saartay isla howsha iyo isla mashiinka, alaabada ayaa loo wareejin karaa howsha xigta kadib markay u qalmaan ;
Ka hor inta aan la keydin, waxaan sameynay kooxda kormeerka badeecada ee dhammeysatay (OQC, QA) si ay u fuliso kormeerka dhammaanba alaabada. Kahor keenista, waxaan ku sameynaa baaritaanka muunad qaadista alaabooyinka uqalma, si loo hubiyo in alaabtu ay tahay inay kujiraan xaalad aqoon leh markay dhoofinayaan si loo daboolo baahida macaamiisha.
Si loo hubiyo tayada wax soo saarka, Jixin wuxuu si isdaba joog ah u soo iibsaday aaladaha baaritaanka saxda ah sida muraayadaha, altimitir laba-cabbir ah iyo cunsur cubic ah, wuxuuna aasaasay xarun lagu ogaanayo saxsanaanta, taas oo xaqiijisay in si buuxda ay u gaarto kala-soocidda waxsoosaarka min cabbirka cabbirka illaa shaqeynta ogaanshaha.